JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA JAHAFFAA -
Afaan Oromo Article | Posted By: bakkalcha (08/29/13) Views: 11859
Kana irratti ida’ameetoo, shoorri nuti Oromoonni cufti qabnu hedduu, hedduu jabaa dha. Faayessitoonni (artistoonni) Oromoo deddeebisanii nu qeeqachaa jiru. Hajalaan (Kaasenni) fi siidiin (“CD”) isaan baasan akka hin gurguramne nu hubachiisu. Jarri dhugaa qabu! Oromoonni keessumaa warri biyyambaa jiran, hajalaa fi siidiin yoo baye hedduun isaanii hin bitatani. Walirraa garagalfachuu dha duudhaa taasifatanii jiru. Barroolee, kitaabeewwan, barruuleewwan fi gaazexoota bayan faas bitatanii hin dubbisani. Egaa, kun kan ilaalu Oromoota hundaa miti. Ammoo, garri irra caalaan duudhaa badaa kana hordofaa jiru. Wanneen kun mee kan bayan Oromootafii! Uummata biraa barbaacha deemu-moo, faayessitoonni fi barreessitoonni Oromoo? Kana bakka jirru maratti haasaa walirraa hin cinne adeemsisuun, walqeeqannee, walgorfannee kana sirreeffachuutu karaa qajeelaa taha. “Sa’a abbaan gaafa cabse, ollaan ija buruqsa”, jedha mammaaksi Oromoo tokko! Mee adaraa kana qalbiin itti-yaaduun haa sirreeffannu!
1) gamsiisaa* – dira’aa, ijibbaachisaa, ajaabamaa, ijanfuunee 2) daddii – inaajjii, faara
8) shaanaa – raafuu
*** Baadanuu = qarmii guuruu; baadanamuu, baadansiisuu — Baadantuu = qarmii-guurtuu — faa!
**** Qiirsuu = iccitii dhoksuu. Qiirsituu = iccitii dhoksituu — faa!
****** Keertii = odeessa, oduu. Keertuu = odeessituu. Keerachuu = odeeffachuu; keersisuu = odeessisuu — faa!
Wargamuu = ariifachuu, sardamuu, daddafuu, saatanuu. Wargamaa = ariifataa, daddafaa, sardamaa, saatanaa. Wargamtuu = ariifattuu, daddaftuu, sardamtuu, saatantuu — faa!
***** ** Kabeebsa = wayyeessa, fooyyessa. Kabeebsaa = wayyeessaa, fooyyessaa. Kabeebsituu = wayyeessituu, fooyyessituu — faa!
******** Kaafaneettii = beektuu, hubattuu, bilchoo, gamna, qaroo, afshaala. Kaafanuu = beekuu, hubachuu, gamnoomuu, qaroomuu, afshaalomuu —!